Kabo xanaaneeya deegaanka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Adrian | | Hoyga Cagaaran, Deegaanka
Waxyar iyo in ka badan oo magac iyo shirkado ah oo soo saara waxyaabaha dabiiciga ah.
Sumadda Faransiiska FYE (Qalbigaaga) oo macnaheedu yahay Isbaanishka "dhulkaaga" ayaa la bilaabay kabaha deegaanka iyo kabaha.
Astaantan ayaa kaliya u adeegsanaysa alaabada bey'ada iyo alaabooyinka soo saarkeeda iyo waliba wax baabi'in kara.
Qalabka waxaa ka mid ah dib loo warshadeeyo sida PET inaad ka hesho dhalooyinka caagga ah, cudbi dabiici ah xarkaha iyo gogosha. Si aad u siiso kabaha midabkooda waxay isticmaalaan midabbo iyo tinctures deegaanka iyada oo aan la wasakheyn ama sunta sunta ah ee salka ku haysa biyaha sidaa darteed iyaguna sidoo kale biodegradable.
FYE sidoo kale waxay soo saartaa kabo tayo sare leh iyo moodello kabaha oo leh saameyn deegaanka oo hooseeya.
Calaamaddan kale waxay isticmaashaa ganacsi waara oo magdhow ku bixiya Qiiqa CO2 lashaqaynta mashruuc dhiraynta kaynta gudaha Indonesia ka mid ah falalka kale ee deegaanka iyo bulshada.
FYE waa tusaale shirkad bulshada masuul ka ah oo deegaanka u heellan, gaar ahaan waaxda sida kabaha. Maaddaama ay jiraan shirkado waaweyn oo soo saara kabo isboorti iyo noocyo kale oo kabo ah oo fuliya dhaqamo aan mas'uuliyad badan saarin oo soo saara waaweyn saamaynta deegaanka laakiin sidoo kale waxay ka faa'iidaystaan ​​shaqaalaha.
Aad ayey muhiim u tahay in shirkaduhu ay ka walwalaan soo saarista wax soo saar aan wax u dhimeynin deegaanka iyo waliba inay iska kaashadaan hagaajinta tayada nolosha deegaanka ee meeraha.
Annaga macaamil ahaan waa inaan taageernaa badeecada noocan ah si aan u muujino inaan sidoo kale xiiseyneyno ilaalinta deegaanka, iibsashada alaabada dabiiciga ah.
Ballanqaadka deegaanku waa inuu iska lahaadaa qof walba habka ugu fudud ee lagu caawin karona waa beddelidda caadooyinka isticmaalka dadka kale ee bulsho ahaan iyo bey'ad ahaanba waarta.
Haddii ay tahay meel aan gaari karno, waxaa ku habboon in aan dooranno alaab dabiici ah, dib loo warshadeeyay, oo la nooleyn karo oo ilaalinaysa deegaanka.
Waa suurtagal in lagu socdo kabo bey'adeed iyo sidan oo kale in raadadkaaga meeraha uu aad u yar yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » Kabaha daryeelka deegaanka
Xusuus cagaaran oo lagu xasuusto dhibbanayaasha 9/11 ee New York